Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Brits 'Favorite TV Shows Zvave Kupa Kukuru Kurega Basa
Tsvagiridzo nyowani uye maonero enyanzvi anowanikwa paFutureLearn.com inosimbisa kuti TV nekutepfenyura zvinokwezva zvingave zvinokurudzira Brits kuita sarudzo dzebasa dzakasiyana uye kuti tsika yepop inoramba ichipesvedzera dzidzo, kudzidziswa uye mabasa.
Kuvharika kwakawanda uye kushanda kubva kumba kwakonzera kuti maBrits akawanda ave nenguva yakawanda yekudyisa maTV uye ikozvino, tsvakiridzo nyowani kubva kuFutureLearn inoratidza kuti ivo vari kubatsira sei kune izvo vanhu vanoda kudzidza nezvazvo uye nzira dzavo dzebasa nesarudzo.
Zvingangove zvikamu zviviri kubva muzvishanu (39%) zveBrits zvakakwezvwa neBridgerton-akakodzera kudhakwa nemabhuku ayo echinyakare, Squid Game yekunakidza kwayo kugadzirisa matambudziko (33%) uye Mushure meHupenyu maitiro ayo ekusuwa (40%), panogona kunge paine zvimwe. kune zvido zvenyika nezvavanokunda pakuita basa. Ko maTV anoratidza kuti grip iyo UK inonyatso kutaura zvakawanda nezve Brits kupfuura zvavaifunga, uye ichi chingave chikonzero chekusiya basa kukuru sezvatinozviziva izvozvi?
Sezvo The Great Resignation ichiri kuramba ichiruma uye maBrits vachinzwa kusagadzikana nezve nzira dzebasa ravo, tsvakiridzo nyowani kubva kuUK yakakura kwazvo online dzidzo papuratifomu, FutureLearn.com, inoratidza maratidziro eTV atinoda, angangove mhinduro kuzvinangwa zvedu zvebasa.
Educational Psychologist, Dr Kairen Cullen, anotsanangura kuti sei kukweverwa kune zvimwe zvinhu zvezviratidziro zveTV zvichigona kuratidza kuti vanhu vanogona sei kukunda mune mamwe mabasa, kubatsira vanhu vasina chokwadi chekuti votangira papi kuita danho rekutanga pakuchinja mabasa.
Zviratidziro zvakaita seDzidzo yeBonde yave nemukurumbira nekuda kwemaitiro avanoita nyaya dzakaita sedzebonde uye murume kana mukadzi uye zvinoita kuti zvive nyore kutaura nezvazvo zvichienderana ne36% yeBrits. Madingindira akaita seaya anowanikwawo mubasa remurapi pamwe nezvidzidzo zvakaita seGlobal Intimacies: Bonde, Simba, Gender neMigration.
Dzimwe nguva, kukanganiswa kweako aunofarira TV anoratidza kushoma kujeka, sezvinoonekwa muchikamu chechishanu cheBrits vanoona Kuuraya Evha nekuti zvinoita kuti vade kufamba nenyika. NeFutureLearn's Intro yeKufamba uye Kushanya kosi, Brits inogona kuita kuti chiroto ichocho chive chokwadi.
Kunakidzwa nenyika yekufungidzira umo Game of Zvigaro zvoumambo yakaiswa (68%) inoratidza kushoma kwechinyakare hunyanzvi hwedzidzo sekugadzira. Kufarira kwakakwana kwebasa rekugadzira mafirimu, semhedzisiro kutora Mwenje, Kamera, Kombuta - Chiito! Maitiro eDigital Tekinoroji ari Kushandura Firimu, TV, uye Mitambo inogona kuve yekutanga nhanho kuenda mumunda iwoyo.
Nemhuri dzinosvika Mamirioni makumi maviri nenomwe muUK dzine mukana wekuona terevhizheni*** tisingarevi huwandu hwenharembozha nematablet izvo vanhu vava kukwanisa kuona zvirongwa zvepaTV, pesvedzero yezvirongwa muhupenyu hwemazuva ese iri pachena. Kubva pakusarudza fashoni kusvika kumumhanzi watinoda, pane chimwe chinhu chemunhu wese, kusanganisira zvikamu zviviri kubva muzvishanu zveBrits vanotarisa Chiremba Ndiani kuongorora nzvimbo uye saka vangangowana basa muAstrobiology rinozadzisa nekutora Upenyu paMars.
Astrid deRidder, Director weZviri muFutureLearn, akati: “PaFutureLearn, donzvo redu nderekushandura mukana wekuwana dzidzo. Mapurojekiti akadai seaya anoratidza kuti dzidzo, zvaunofarira pamunhu uye hupenyu hwemazuva ese zvinofamba sei uye kuti chinhu chimwe nechimwe chingaite sei pane chimwe. Nekubatanidza zvinofarirwa nevanhu zveTV uye zvikonzero nei vachikweverwa kwavari kune vangangove makosi uye nzira dzebasa zvinoratidza vanhu vavanogona kudzidzisa nekushanda munzvimbo yavanoda chaizvo. "
Dr Kairen Cullen, Registered Practitioner Psychologist (Dzidzo), akati: “Tsika dzinofarirwa, sezvinoratidzwa mumapurogiramu epaTV, dzinowanzoratidzwa muzvisarudzo zvekudzidza zvinokurudzira vanhu uye muzvisarudzo zvedzidzo, zvavanoita. Iwo emazuva ese ekuona TV maitiro evanhu anopa nzwisiso inobatsira mune inobvira yebasa sarudzo kwavari. Dhigirii iro izvi zvaunofarira zvinoratidzira zvinofarirwa nevanhu uye mabasa anodikamwa nemabasa zvichasiyana pakati pevanhu asi chiitwa chinobatsira kuvheneka paiyi sarudzo yekuzvivaraidza uye kushandisa zvatichawana mukufunga dzakasiyana kudzidza uye ramangwana rebasa sarudzo.
dzidzo Technology ushanyi
Kusvuta uye Autism: The link in pregnancy
Honolulu chete US guta riri pamusoro gumi akanakisa zororo ...